DJI waxay soo bandhigaysaa xasilinta aaladda casriga ah ee cusub, 'DJI Osmo Mobile 3 - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM DJI Waxay Soo Bandhigeysaa Qalabeyn Talefoonsiin Casri ah DJI Osmo Mobile 3
Si looga dhigo fiidiyowyo u qalma magaca, adeegsiga xasiliyaha waa ku-dhawaad ​​waajibaad. Waxaa jira maanta noocyada aaladaha oo dhan. Oo ay ku jiraan telefoonada gacanta. Iyo DJI waxay daaha ka qaadday abuurkeedii ugu dambeeyay duurka, DJI Osmo Mobile 3.
Bishii hore, DJI ayaa si rasmi ah shaaca uga qaaday Ronin SC, oo ah dejin loogu talagalay kaameeraha isku-dhafan. Waa inaad lahaataa haddii loo isticmaalay inaad sameyso fiidiyowyo tayo gaar ah leh - oo aadan dooneynin inaad madax xanuun ku siiso dhagaystayaashaada -. Haddii aad raadinayso qalab u dhigma laakiin casriga ah, astaanta Shiinaha ayaa sidoo kale leh waxaad ubaahantahay xaddigeeda Osmo. Maanta, waxay daaha ka qaaday abuurkeedii ugu dambeeyay, the DJI Osmo Mobile 3, oo loogu talagalay khaaska ah taleefannada casriga ah, aad u is haysta, waana inay boos ka hesho boorsooyin badan oo xiiseeya fiidiyoowga wareega. Soo bandhigida qalabkan yar ee laakiin aad u muhiim ah.
DJI waxay soo bandhigaysaa qalabkeeda cusub ee xasilinta casriga
Sida magaceedu muujinayo, kani waa DJI-ga saddexaad ee xasilloonida waxayna u muuqataa in astaanta ay ku saxday nuqulkeeda iyada oo la sifeynayo inta badan walaacyada laga yaabo in qaar ka mid ah adeegsadayaasha OSmo Mobile 2. Marka ugu horeysa, ogaada in Osmo Mobile 3 uu laaban karo, waxay awood u yeelan doontaa in la iloobo xitaa xitaa jeebkaaga ama boorsadaada. Osmo Mobile 2, ma uusan foorarsaneyn oo, iyada oo aan ahayn mid aasaasi ah oo asaasi ah, mararka qaar way adkaan kartaa in boorsada lagu dhejiyo.
The DJI Osmo Mobile 3, waa la laabi karaa
Sidoo kale qarnigan saddexaad waxaa ku jira astaamaha moodelkii asalka ahaa, sida badhanka kiciyaha ee u saamaxaya isticmaaleyaasha inay beddelaan hanuuninta iyo habka hal guji. Fursadaha cusub ayaa sidoo kale ka muuqda barnaamijka heesaha loogu talagalay ee 'DJI Mimo', sida Sheekada Sheekada, oo ka caawisa dadka wax abuura inay u soo ururiyaan sheekooyinkooda si dhakhso ah oo fudud iyagoo adeegsanaya nidaam hage ah. Inta soo hartay, Osmo Mobile 3 waxay aad ugu egtahay Osmo Mobile 2 waxayna soo bandhigaan oo ay ku jiraan isku xukun isku mid ah saacadaha 15. Marka la eego qiimaha, waxaa lagama maarmaan ah in lagu tiriyo 119 $ nooca caadiga ah iyo 139 $ wixii xirmada ka kooban weel gaadiid ah iyo kiis gaadiid. Haddii aad xiiseyneyso, aad bogga rasmiga ah ee DJI in la amro.
Samsung wuxuu daaha ka qaadaa dareemiyaha sawir qaadka ee '108 MP' oo lala kaashanayo Xiaomi
Guddi 10 ah oo ah 15% oo keliya dukaanka HarmonyOS?
Maya, jadwalka Samsung Galaxy Note 10 ma aha bir daxalan
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/dji-devoile-son-nouveau-stabilisateur-pour-smartphone-le-dji-osmo-mobile-3-325255
Baahida Xawaaraha: Heat wuxuu kuxiran doonaa dhaqanka baabuurta magaalada